ललितपुर सडकको हरियो रङमा अब साइकल सरर (भिडिओ) :: Setopati
ललितपुर सडकको हरियो रङमा अब साइकल सरर (भिडिओ) 'यो संकेतसहितको नेपालकै पहिलो साइकल लेन'
समिक्षा अधिकारी ललितपुर, कात्तिक ६
ललितपुरमा हालसालै रंगिएको साइकल लेन। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
सडकमा हामीले ठाउँठाउँमा सेतो रङले पोतिएको जेब्राक्रस देखेकै छौं। जेब्राक्रसबाट बाटो काट्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि बुझेका छौं।
ललितपुरको मूल सडकमा भने अहिले नयाँ रङ देख्न सकिन्छ– हरियो।
सडकको दुवैतर्फ किन पोतिएको होला हरियो रङ? के हरियाली सडकसम्मै पुगेको हो त? वा सडक सौन्दर्यीकरणको नाममा यस्तो रङ लगाइएको हो?
होइन है! यो साइकल लेन हो।
साइकल चलाउनेहरूको बेग्लै लेन होस् र अरू सवारीले नमिचून् भन्दै सुरक्षा महशुस गराउन ललितपुर महानगरपालिकाले यस्तो रङ लगाएको हो।
गत वर्ष ललितपुर महानगरले आफ्नो नगरलाई साइकलमैत्री सहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो। यो योजनाअनुसार चालु वर्षभित्रै साइकल लेन बनाइसक्नुपर्ने थियो।
थोरै मूल्यमा बोली लगाएको कम्पनीले साइकल लेन बनाउने काम पायो। तर पछि काममा ढिलासुस्ती, आलटाल गर्न थालेपछि निर्धारित मितिमा सकिएन। काम अघि नबढाएपछि मेयर चिरिबाबु महर्जनले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई कार्यालयमै बोलाएका थिए।
'काम नपाउला भनेर थोरै रकममा बिड (बोलकबोल) गर्ने अनि काम पाएपछि आनाकानी गर्ने यो त भएन,' उनले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भनेको कुरा सेतापाटीलाई सुनाए, 'कालो सूचीमा पार्‍यौं भने राम्रो हुँदैन। समयमै काम सक्नुस्, हामी पनि सघाउँछौं भनेपछि चासो देखाए।'
अहिले ललितपुर प्रवेश गर्ने मुख्य सडक थापाथलीबाट छिर्नेबित्तिकै हरियो रङको छुट्टै लेन देखिन्छ।
'पहिलो वर्षको काम अन्तिम चरणमा छ। हरियो पोत्ने काम केही ठाउँमा मात्रै बाँकी छ,' उनले भने।
भिडिओः सुजन अधिकारी
त्यति मात्र होइन मेयरले रङको अर्थ पनि खुलाए। संसारभर नै साइकल लेनलाई 'हाइलाइट' गर्न हरियो, रातो र निलो रङ प्रयोगमा ल्याइने चलन छ। हाम्रोमा भने हरियो प्रयोगमा आएको हो।
उनका अनुसार यो 'डेडिकेटेड' लेन हो। त्यहाँ साइकलबाहेक अरू सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन। हरियो रङको लेन फराकिलो र अरू सवारी चाप नहुने ठाउँमा बनाइने उनको भनाइ छ।
हिमालय होटल र बागमती पुलको आसपास क्षेत्रमा भने पूरै रातो लेन बनाउने योजना भएको मेयर महर्जन बताउँछन्।
अहिले महानगरभित्र ५.१ किलोमिटरको साइकल लेन बनेको छ। दोस्रो वर्षको योजनाअनुसार यसैलाई बिस्तार गरी अन्दाजी ७ किलोमिटर थप्ने योजना छ। भित्री सडकमा भने तत्कालै लेन बनाउने योजना छैन। त्यसो त भित्री गल्ली साँघुरो हुनाले साइकल लेन तय गर्न सम्भव नभएको मेयर महर्जन बताउँछन्।
'भित्री सडकमा लेन बनाउँदैनौं। यस विषयमा हामीले अध्ययन पनि गरेका छौं,' उनले भने, 'त्यसमार्फत भित्री सडकमा मोटरसाइकल पनि छिर्न दिनुहुन्न भन्ने सुझाव पाएका छौं।'
महर्जनले त्यसैमा थपे,' त्यसैले त्यस्ता सडक साइकल चलाउन र हिँडडुल गर्नेका लागि मात्र हुनेछ।'
ललितपुरलाई साइकल लेनको अध्ययनका लागि नेपाल साइकल सोसाइटीले सहयोग गरिरहेको छ। सोसाइटीका उपाध्यक्ष सोम रानाका अनुसार महानगरले साइकल योजनालाई सकारात्मक तरिकाले अघि बढाइरहेको छ। त्यही अनुरुप हरियो रङ लगाउने योजना पनि स्विकृत भएको हो। यसले साइकल यात्रीलाई थप हौसला पुग्ने उनी बताउँछन्।
'एक हिसाबले साइकल यात्रीको अधिकार सुनिश्चित भएको संकेत पनि गरिएको हो। अन्य सवारी चालक पनि सजग हुन्छन्,' उनले भने, 'अब आफ्नो लेनमा गुडिरहेको साइकल चालकलाई अन्य सवारीले हर्न बजाउन पाउँदैनन्। लेनमा रोकेर राख्न पनि पाउँदैन।'
हरियो रङमाथि साइकलको लोगो पनि हुनुपर्छ। त्यसमा अहिले काम भइरहेको छ। यसरी संकेतसहित लेन बनाइएको नेपालमा पहिलो पटक भएको सोम बताउँछन्।
साइकल लेन बनाउने कुरा काठमाडौं उपत्यकाको मेयर फोरममा पनि उठेको रहेछ। मेयर महर्जनले आफैंले यो विषयमा कुरा उठाएको बताए।
'साइकल लेन महँगो पनि छैन। सस्तो र वातावरणमैत्री छ भनेर कुरा राखेको थिँए,' उनले भने, 'बागमतीसम्म मैले ल्याएँ। अब त्यो लेन काठमाडौंले बुढानिलकण्ठसम्म तानेर लगौं भनेको छु। यस विषयमा फोरमका मेयरहरू पनि सकारात्मक नै छन्।'
महानगरभित्र साइकल पार्किङका लागि १० स्थान छुट्याइएको छ। यो काम सकिइसकेको छ। यति मात्र होइन, दोस्रो वर्षको योजनामा साइकल बहालमा दिन मिल्ने व्यवस्था पनि छ।
'हामीले अर्को योजनामा साइकल भाडामा लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं। साइकल किन्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्दा बजार पाँउदैन,' उदाहरण दिँदै भने, 'हामीले पुलचोकबाट लिन मिल्ने एक ठाउँ, लगनखेलबाट लिन मिल्ने अर्को ठाँउ राख्छौं। पुल्चोकबाट लियो भने लगनखेलमा छोड्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।'
महानगरले साइलक ऐन तर्जुमा गरिसकेको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गराउन बाँकी छ। तर ढिलाइ भयो नि?
साइकलका लागि राष्ट्रिय नीति नबनेकाले स्थानीय ऐन पास गराउन कठिन भएको जवाफ मेयर दिन्छन्।
'प्राविधिक कारणले ऐन पास गर्न सकिएन,' उनले भने, 'तर साइकल यात्रीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दो कोसिस गरेका छौं। त्यसका लागि अहिले साइकल लेनमा हरियो, रातो रङ लगाएका हौं।'
गत साल मंसिर ४ गते कुपण्डोल–पुल्चोक सडक खण्डमा पहिलो साइलक लेन उद्घाटन गरेपछि उनले चर्चा बटुलेका थिए। अहिले त्यसलाई कामद्वारा नै सिद्ध गर्न लागिएको उनी बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कात्तिक ६, २०७७, ०७:०६:००